को बन्दैछ ०१७ को वर्षव्यक्तिः डोनाल्ड ट्रम्पदेखि किम जोङ उनसम्म
एजेन्सी । सन् २०१७ साल सकिनै लाग्दा अमेरिकाको विश्वचर्चित पत्रिका टाइम म्यागेजिनले हरेक वर्ष झैँ यसपटक पनि १० जना वर्ष व्यक्तिका फाइनलिस्टको नाम सार्वजनिक गरेको छ । म्यागेजिनको सर्टलिस्टमा २०१७ को वर्ष व्यक्तिका लागि उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति देखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ समेतको नाम छ ।
टाइम म्यागेजिनको सर्टलिस्टमा परेका १० व्यक्तिः
सन् २०१६ को वर्ष व्यक्ति बनिसकेका ट्रम्पको नाम यस वर्ष पनि चर्चामै रह्यो । विभिन्न क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णय गर्दै उनी २०१७ सालभरी विवादमुक्त बन्न सकेनन् । उत्तर कोरियासँगको वाकयुद्ध देखि कतारमाथि साउदी अरब नेतृत्वका देशहरुले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थनसम्मका विषयले उनलाई विवादमा पारिरह्यो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस वर्ष विवादरहित दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनबाट उनको नाम र सिद्धान्त पार्टी विधानमा थपिएपछि उनी माओजत्तिकै शक्तिशाली नेताको रुपमा चिनिएका छन् । यससँगै उनले अमेरिकालाई नै विश्वशक्तिबाट विस्थापित पार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनको चर्चा विश्वभरी छ ।
३. किम जोङ उन
एक साताअघि मात्रै अमेरिकासम्म प्रहार गर्नसक्ने क्षेप्यास्त्र परिक्षण गर्दै चर्चा र विवादमा परेका उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन सन् २०१७ भरी विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । अमेरिकासँग वाकयुद्ध गर्दैआएका किम पछिल्लो वर्ष आणविक हतियार प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण सफलता हात पारेका बताउँदैआएका छन् । वर्षभरी नै उनले आफ्नै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहे । गत सेप्टेम्बरमा त उनले हाइड्रोजन बम विस्फोट गराएपछि आणविक युद्धको त्रास विश्वभरी फैलियो ।
४. युवराज मोहम्मद बिन सलमान
साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान पनि चर्चामै छन् । ३२ वर्षे युवराजले देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई नै भ्रष्टाचार आरोपमा गिरफ्तार गराएपछि एकाएक चर्चामा आएका हुन् ।
अमेजनका प्रमुख कार्यकारी जेफ बेजोस सन् २०१७ मा संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । उनको सम्पत्तिले केही समय १०० अर्ब डलरको सीमा पनि नाघेको बताइएको थियो ।
वन्डर वुमन फिल्म निर्देशक जेन्किन्स भने यस वर्ष एक सफल फिल्मकर्मीको रुपमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहिन् । उनको फिल्म रिलिज भएको पहिलो सातामै १० करोड डलरभन्दा बढी रकम कमाउन सफल भएपछि पनि उनको चर्चा झन चुलियो ।
७. रोबर्ड म्युलर
रोबर्ड एक शक्तिशाली अमेरिकी वकिल हुन् । एफबिआइका निर्देशक जेम्स कोमेलाई ट्रम्पले बर्खास्त गरेपछि ट्रम्पको चुनावी अभियान र रुसको सम्बन्धबारे छानबिन गर्न विशेष वकिलका रुपमा नियुक्त भएका थिए उनी । यही क्रममा पनि उनको कामको चर्चा विश्वभर फैलियो । उक्त अभियोगबारे उनले अहिलेसम्म चार जनाविरुद्ध आरोप दायर गरिसकेका छन् ।
८. कोलिन केपरनिक
कोलिन एक प्रभावशाली अमेरिकन फुटबलर हुन् । गत वर्ष अश्वेतहरुमाथि प्रहरी बर्बरताको विरोध गर्दै उनले राष्ट्रियगानको समयमा घुँडा टेकेर प्रदर्शन गरेपछि उनको पक्षमा थुप्रै फुटवलका फ्यान समाहित भए । यस वर्ष उनी कुनै टोलीमा नभए पनि विरोध गर्ने उनको सृजनात्मक शैलीको विश्वभर प्रशंसा भएको छ ।
हलिउडका शक्तिशाली निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनको यौन दुव्र्ययवहारको खुलासा भएपछि यसविरुद्धको अभियानमा विश्वभरका महिलाहरु सहभागी भए । हलिउडमै दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध आवाज उठे । यही आन्दोलनलाई पनि टाइम म्यागेजिनले विश्वभर प्रभावशाली समुहको रुपमा मनोनयन गरेको हो ।
यो पनि एक सामाजिक अभियान नै हो । जुन ट्रम्प प्रशासनले बाराक ओबामाको कार्यकालको ‘डिफर्ड एक्सन फर चिल्ड्रेन अराइभल प्रोग्राम’ अन्त्य गर्नसक्ने भएपछि उठेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले जनविरोधी अभियान गरेपछिको ‘मुभमेन्ट’ लाई पनि टाइमले एक प्रभावशाली समूहको रुपमा राखेको हो ।
सन् १९२७ देखि हरेक वर्ष विश्वभर प्रभावशाली व्यक्ति, समूवा वा विचार छान्दै आएको टाइम म्यागेजिनले यही बुधबार सन् २०१७ को वर्षव्यक्ति छान्दैछ ।